Archive du 20180914
Faritanin’i Fianarantsoa Ifanotofan’ireo kandida
Mambabo ny fon’ireo mponin’i Fianarantsoa avokoa tato ho ato ireo kandida ho filoham-pirenena. Nampahafantatra ny laharana misy azy voalohany ao anaty bileta tokana tany an-toerana ny filoham-pirenena teo aloha, Hery Rajaonarimampianina.
Be konetaka iray trano
Miarahaba e ! Tsy sanatria manao zinona ny fihetseham-ponareo mianakavy aloha ry Jean fa mba lasa ihany ny saina hoe ilay inona ary no tena mampikonetaka lava anareo ireto e ?
Fanafody « Paracetamol » Ahitana « virus » mahafaty haingana ny sasany
Mivoaka ny fampitandremana amin’izao fotoana ny tsy tokony hihinanana fanafody « Paracetamol » P /500.
Fampiofanana ny tantsaha Mahatsara hatrany ny vokatra
Mandray anjara amin’ny Tsenabe iraisam-pirenena mahakasika ny ara-pamokarana (FIA) andiany faharoa etsy amin’ny